Maitiro ekudzora uremu pasina kukuvadza kune hutano | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Sei kurasikirwa uremu pasina kukuvadza kumuviri?
Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuteedzera mishoma mitemo:
Inwa zvinwiwa zvakawanda. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kupa muviri muviri huwandu hwakaringana hwemvura, iyo inofanirwa kunwiwa mune yakachena fomu, uye isina kunwiwa majusi, kofi uye zvinwiwa.
2. Chiitwa chemuviri. Kuti ubvise huremu hwakawandisa uye usawane ganda rakatsiga semhedzisiro, munhu anofanirwa kuita imwe mhando yemutambo. Hazvina kudikanwa kuti uende kunzvimbo yekurovedza muviri, ita maitiro akaomarara, nekuti zvichave zvakakwana kuita zvakapusa kurovedza muviri uye kureruka kumhanya.
3. Chikafu chakakodzera. Kurasikirwa nehuremu hwakawandisa kunenge kwakaoma zvakanyanya kana munhu akasachinja chikafu chavo chezuva nezuva. Zviri nyore kwazvo kutaura zvakanaka kune kufutisa, nekuti izvi iwe unongofanirwa kusanganisa chikafu chakakangwa, chinoputa uye chakakora kubva kuchikafu.
4. Vitamin nemaminera. Iwe unofanirwa kudya huwandu hwakaringana hwemiriwo mitsva nemichero, kunyanya chikafu chine hutano chekudzikisa huremu ndeichi: maapuro, celery, karoti, broccoli, beet, manhanga, mazambiringa, matamba, mabhanana uye mimwe mimwe miriwo nemichero.
Iwe haufanire kusiya zvachose chikafu, uzvinetese nekuneta kwekushanda uye kudya. Zvese izvi zviito hazviwanzo kutungamira kune yakamirirwa kwenguva refu mhedzisiro, uye pane zviitiko zvekuti matambudziko ehutano anogona kumuka kubva pakudya kunetesa uye kudzidziswa.
Kumhanyisa uremu - vhidhiyo